ဗိုလ်ချုပ်တွေ ပင်စင်ယူတဲ့အခါ ဝန်ကြီး ရာထူးရတာ အစဉ်အလာ ဖြစ်လာပြီလား | ဧရာဝတီ
သာလွန်ဇောင်းထက်| February 14, 2013 | Hits:15,498
15 | | ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းကို စစ်ဆေးနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မြ၀တီ)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးအဖြစ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းကို ခန့်အပ်ရန် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြအတည်ပြုလိုက်မှု အပေါ် ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက စစ်တပ်ကြီးစိုးသော စနစ်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းမှုအဖြစ် ဝေဖန်လိုက်ကြသည်။
စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် ၁၇ ကျောင်းဆင်း တဦးဖြစ်သော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းသည် အသက် ၆၀ ပြည့်တော့မည် ဖြစ်ပြီး များမကြာမီ လာမည့်လ အနည်းငယ်အတွင်း ပင်စင်ယူရတော့မည်ဖြစ်ကာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့အကြား ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းကို ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်နှင့်နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ အဆိုအရ သိရှိရသည်။
“၀န်ကြီးအဖြစ် အတည်ပြုခန့်အပ်တဲ့ သမ္မတ အမိန့်ထွက်ရင်တော့ ဦးမြတ်ဟိန်း ဖြစ်သွားတော့မှာ။ တပ်ရာထူး ကတော့ တရားဝင် အနားယူရမှာပါ။ တပ်ပိုင်းမှာ ရာထူးတွေက ကျပ်နေပြီ။ အရင်ကဆိုရင် စစ်တပ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို တိုင်းမှူးတွေ၊ ၀န်ကြီးတွေအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ရင်၊ တပ်ရာထူးနဲ့ပဲ အရပ်ဘက်ကို ပြောင်းလိုက်ရင် တပ်ပိုင်းမှာ ရာထူးတွေ လစ်လပ်တော့ အောက်က အငယ်တွေ တောက်လျှောက် တက်လာလို့ရတယ်။ အခုက ထိပ်ပိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့သူတွေက ပင်စင်မယူရင် အောက်က လူတွေ ရာထူးတိုး၊ အဆင့်တိုးအတွက် တန်းစီစောင့်နေရတယ်” ဟု စစ်တပ် အသိုင်းဝိုင်းနှင့် နီးစပ်သူက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလက ဒုတိယသမ္မတ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ရာထူး နုတ်ထွက်သွားစဉ်က ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေကို ဒုတိယ သမ္မတ အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန် အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် ၁၆ ကျောင်းဆင်း တဦးလည်းဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရေဖြစ်သူ အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဉာဏ်ထွန်းကို တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဒုတိယ သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ တင်မြှောက်ရာတွင်လည်း ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီဝင် တချို့နှင့် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
စက်မှု ၁ ၀န်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်၊ တောင်သာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လည်း ဖြစ်သူ ဦးအောင်သောင်းကမူ ဒုတိယ သမ္မတအဖြစ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဉာဏ်ထွန်းအား တင်မြှောက်လိုက်မှုကြောင့် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာထူးလစ်လပ်မှုရှိပြီး နောက်လူများအတွက် ရာထူးတိုးရန် အခွင့်အရေးများ ရှိလိမ့်မည်ဟု ထိုအချိန်က ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာ တခုနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ နယ်စပ်ရေးရာ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ရာထူးများအတွက် ခန့်အပ်လိုသော တပ်မတော်သားများ အမည်စာရင်းများကို သမ္မတထံပေးပို့ပြီး သမ္မတက တရားဝင် ခန့်အပ်ပေးရမည်ဖြစ်ရာ တပ်မတော်က ၀န်ကြီး ၃ နေရာ အလိုအလျောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံရေးသမားများက ပြောဆိုကြသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့အကြား ညှိနှိုင်းမှုဖြင့် ပင်စင်ယူခါနီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားမှ ရာထူးများ ခန့်အပ်လာသည့်အပေါ် အစဉ်အလာတရပ် ပုံစံ ဖြစ်လာခြင်းမှာ စစ်အစိုးရခေတ် ပုံစံ၏ နီးစပ်ရာ ရာထူးပေးသော အလေ့အထတခုကို ပြန်လည် အကောင်အထည်ဖော်သော လုပ်ရပ်တခုအဖြစ် နိုင်ငံရေးသမားများက သုံးသပ်ကြသည်။
အမျိုသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ နာယက သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်က ပင်စင်ယူခါနီး စစ်တပ်မှ ဗိုလ်ချုပ်များကို သမ္မတ၊ ၀န်ကြီးအပါအ၀င် နိုင်ငံရေး ရာထူးပေးခြင်းဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲနိမ့်ကျခဲ့ရကြောင်း၊ ပြည်သူများ အနေဖြင့် ယင်းအစဉ်အလာကို ကန့်ကွက်သင့်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အခုမှတင် မဟုတ်ဘူး၊ ဟိုတုန်းက မဆလ ခေတ်တုန်းက ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ လုပ်ခဲ့တာပဲ။ နောက်ဆုံး တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်တဲ့ သူတွေက စစ်တပ်က လူတွေချည်းပဲ။ အဲဒါက အစဉ်အလာက ပြန်ပြီး ထူထောင်တာပေါ့။ တိုင်းပြည်ကတော့ ဒါမျိုးကို ကန့်ကွက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ သဘောထားတော့ ပြောဖို့ကောင်းတယ်။ ပင်စင်သွားခါနီး စစ်တပ်က လူတွေကို ဒီလိုသာ ပို့နေမယ်ဆိုရင် အစိုးရဌာနတွေမှာ အမှိုက်ခြင်းလို ဖြစ်လာမယ်။ စစ်တပ်က အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေ အစိုးရဌာနထဲ လာထည့်သလို ဖြစ်နေတယ်။ ၀န်ကြီးဌာနတွေက အမှိုက်ပုံကြီးလို ဖြစ်လာမယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း တိုင်းပြည်မှာ ဘာမှ အကျိုးကျေးဇူး ခံစားရတာမဟုတ်ဘူး” ဟု ဦးဝင်းတင်က ဆိုသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား တဦးအဖြစ် ရှုမြင်ခံရသော ဦးသိန်းစိန်အနေနှင့် စစ်တပ်မှ ဗိုလ်ချုပ်များကို ၀န်ကြီးရာထူးများတွင် ခန့်ထားခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို မပီပြင်စေဘဲ လူထုနှင့်နိုင်ငံတကာ၏ ယုံကြည်မှု ထိခိုက်စေသည်ဟု သုံးသပ်မှုများလည်းရှိသည်။
ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (မြန်မာ) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေက “သူတို့လူတွေပဲ သူတို့ပြန်ခန့်နေကြတာ။ သူတို့လူတော့ သူတို့ အပိုင်ပေါ့ဗျ။ အရင်ပုံစံပဲလို့ ပြောလို့ရတယ်။ တပ်ကို ထိုးသွင်းတာပေါ့၊ ဌာနတွေထဲကို။ တော်တော် များများမှာလည်း တပ်က လူတွေပါတယ်ဗျ။ ဌာနတွေ၊ အရပ်ဘက်တွေမှာလည်း တပ်ကလူတွေချည်းပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ပြောစရာတွေတော့ အများကြီးရှိတယ်။ တပ်က နေရာတွေမှာ တခြား အရာရှိငယ်တွေကို နေရာပေးချင်လို့လား၊ အစိုးရအဖွဲ့မှာ တပ်ကလူတွေ ခပ်များများ ပါလာတာတော့ မကောင်းဘူးဗျာ။ ဒါတွေက လက်ရှိ ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူကို နိုင်ငံရေး ရာထူးပေးတာက ဒီမိုကရေစီ မပီပြင်ဘူးလို့ ပြောနိုင်တာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဟုဆိုသော်လည်း ယခင်စစ်အစိုးရ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များ မပျောက်သေးဟု ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောဆေးဝါးက ဆိုသည်။
“ဟိုတုန်းက အရှိန်မသေးဘူး။ တယောက်နဲ့တယောက် သိကြတယ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ယုံကြည်မှုရှိတယ်၊ စိတ်ချတယ်ဆိုတဲ့ အရှိန်တွေက မကုန်သေးဘူးလေ။ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဆိုတာကိုတော့ ယုံကြည်မှု အားနည်းစေတယ်။ သူတို့က ကိုယ့်အချင်းချင်း သိတဲ့သူ၊ လက်တွဲဖူးတဲ့ သူကိုပဲ တာဝန်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်ကြတယ်။ အစဉ်အလာဖြစ်သွားရင်တော့ ဘယ်ကောင်းမလဲ၊ တဖြည်းဖြည်းတော့ ပြောင်းရတယ်” ဟု ဦးစောဆေးဝါးက ရှင်းပြသည်။
ပြည်ထောင်စုဟု အမည်ခေါ်တွင်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗဟိုအစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွင် တိုင်းရင်းသားများထက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသာ နေရာမှုများ ပိုမိုများပြားသည်ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တိုးတက်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်က ပြောသည်။
“ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စစ်တယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေကို တကယ်နေရာ ပေးရမှာပေါ့။ အခုတော့ ၀န်ကြီးဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး ရာထူးတွေကို အရင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေ၊ အရင်အစိုးရ လက်ထက်က ဒုဝန်ကြီး လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုပဲ ပြန်ပေးတာပဲလေ။ ၀န်ကြီးဆိုတာမျိုးက နိုင်ငံရေး ရာထူးတွေဗျ။ ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူး” ဟု ဒေါက်တာအေးမောင်က ဆိုသည်။
ကချင် တိုင်းရင်းသား တဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာတူးဂျာနှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးကမူ မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ရေးအတွက် ၀န်ကြီးများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များတွင် ခန့်ထားရာတွင် တတ်သိနားလည်သော အတတ်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်များကို နေရာပေးသင့်သည်ဟု ဆိုသည်။
“တပ်မတော်က အငြိမ်းစားယူမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဦးစားပေးတာပုံစံပဲ။ အတတ်ပညာရှင်တွေ၊ အသိပညာရှင်တွေ ခန့်သင့်တယ်။ သမ္မတကလည်း တပ်နေရာပိုင်းကို အဓိကမထားဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သူတွေကို ပေးတဲ့ သဘော ဆောင်တာထင်တယ်။ အစဉ်အလာဖြစ်ရင်တော့ မကောင်းဘူး။ ကြိုးနီစနစ် ပုံစံပြန်ဖြစ်သွားတာ။ လူမှန်နေရာမှန် ပြန်ခန့်သင့်တယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေ ခန့်သင့်တယ်။ မျက်နှာမလိုက်ရဘူး။ ဒါမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်” ဟု ဒေါက်တာတူးဂျာက ပြောသည်။
ဦးခွန်ထွန်းဦးကမူ “လုပ်ချင်သလို လုပ်နေတာပဲ။ သမ္မတက ကိုယ်တိုင်ခန့်တာလား၊ ဖိအားကြောင့် ခန့်တာလားတော့ မသိဘူး။ နက်နဲတယ်။ တကယ်ပဲ တတ်သိနားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မယ့်သူတွေကို ခန့်တာက ပိုကောင်း လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ တပ်ကလူကို ခန့်တာထက် အရပ်သားထဲက ကျွမ်းကျင်သူကို ခန့်တာ ပိုသင့်တော်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းကို ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးအဖြစ် နာမည်စာရင်း တင်သွင်းလာချိန်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးအနေဖြင့် မကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်း ကန့်ကွက်ရန် မလွယ်ကူဟု အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ပြောသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းကို ၀န်ကြီးအဖြစ် ခန့်မယ်ဆိုပြီး တင်လာတော့ ကန့်ကွက်ဖို့က ဥပဒေနဲ့အညီမှ ကန့်ကွက် လို့ရမှာလေ။ တပ်က မို့လို့ဆိုပြီး သွားကန့်ကွက်လို့မရဘူး။ သူ ဘာအရည်အချင်း ပျက်ယွင်းတာရှိလဲ၊ ဘယ်လိုမျိုးတွေမှာ ၀န်ကြီး မဖြစ်သင့်ဘူးလဲ အဲဒီလိုမျိုး အချက်အလက်၊ ဥပဒေ အကိုးအကားနဲ့ တိတိကျကျ တင်ပြမှ ကန့်ကွက်လို့ရမှာ။ ကျနော် မကြိုက်လို့၊ တပ်ကမို့လို့ ဆိုတာနဲ့ လုပ်လို့မရဘူး။ နောက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတက သူရဲ့ ၀န်ကြီး အဖွဲ့ကို သူကြိုက်သလို စီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်” ဟု ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ရှင်းပြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းကို ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးအဖြစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က သဘောတူကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
မင်းအောင်လှိုင် အလွန် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သစ် ဘယ်သူဖြစ်မလဲ
20 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Shwe Yoe February 14, 2013 - 11:44 am	They may think themselves as better than the public. Actually, they were the ones who dragged our country back to Stone Age. If these people with green uniforms know better than us, we will not need reform. But the history proves that they are no more than idiots.
Reply	pps12345 February 14, 2013 - 12:41 pm	တပ်မတော်အတွင်း မှာ ရာထူးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကို စားပေါက်ထွင်ပြီး နေရာဖယ်ခိုင်းတာ ဗိုလ်နေဝင်း အိမ်စောင့် အစိုးရ လက်ထက် ကတည်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ အလေ့အထ တစ်ခုပါ။
ဗိုလ်နေဝင်း အိမ်စောင့် အစိုးရ လက်ထက် အာဏာရရချင်း တပ်မတော် အကြီးအကဲတွေ ရန်ကုန်မြို့က နေရာကောင်းမြေလွတ်တွေကို နာမည် ဖေါက်ပြီး ပေးခဲ့တာ အားလုံး အသိပါ။
ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုကို အာဏာလွှဲပြီးနောက်ပိုင်း တပ်မတော်ထဲက ဗိုလ်အောင်ရွှေ တို့လို လူမျိုးတွေကို အာဏာ ထပ်သိမ်းရန် ကြံစည်မှု ပုဒ်မ နှင့် တပ်က ထုတ်ခဲ့တာ အားလုံးအသိပါ။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ လက်ထက် စီးပွားရေး သောင်းကျန်းသူ ဗိုလ်အောင်ကြီး၊ အမေရိကန်သူလျှို ဗိုလ်မောင်မောင် တို့ကို ထုတ်ပစ်ခြင်းအားဖြင့် အောက်ခြေ အရာရှိတွေကို ရာထူးတိုးပေးခဲ့တာ လည်းအားလုံးအသိပါ။
ဗိုလ်တင့်ဆွေ လို အစွန်းရောက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဝန်ကြီး ရာထူးပေးကာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ဆောင်နေသယောင်ယောင် သရုပ်ပြကာ အောက်ခြေစစ်ဗိုလ်တွေကို ရထူးတိုးပေး ခဲ့သလို ဗိုလ်သူရ တင်ဦး လို အလယ် အလတ် လမ်းစဉ် ရှိသူတွေကို တပ်က ထုတ်ပြီး အစွန်းရောက်တွေကို ရာထူးတိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ နဝတ လက်ထက်ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ သခင်ကဲ့သို့ ရာထူးကြီး တပ်မတော် အရာရှိကြီးများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် အရပ်ဖက်ပို့ ဖယ်ရှားသကဲ့သို့ စစ်တပ်ကို ဖွဲ့စည်းပုံ ၅ ဆခန့် တိုးချဲ့ကာ အောက်ခြေ အရာရှိများကို ရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်။
နအဖ အစိုးရ နှောင်းပိုင်းတွင် သက်ကြီး တပ်မတော် အရာရှိများ( မှတ်ချက် ထိပ်ဆုံးမှ မျောက် နှစ်ကောင်မှ အပ) ကို အရပ်ဖက်ဌာနများသို့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ပို့ကာ အောက်ခြေ အရာရှိများကို ရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီလ က်ထက် တွင် အဆိုးဆုံး လုပ်ရပ်မှာ ယခင် အစိုးရ က ပြည်သူများထံမှ သိမ်းထားသော အိမ်များကို စစ်တပ်နာမည်အောက်ထည့်ကာ စစ်တပ်ထိပ်တန်း အရာရှိကြီးများခွဲဝေယူကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း feel စားသောက်ဆိုင်သည် ထိုကဲ့သို့နည်းလမ်းဖြင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးပိုင်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ နဝတ လက်ထက် အကျည်းတန် ဆုံးလုပ်ရပ်မှာ မတရားသိမ်း ထားသော ညောင်ရွှေစော်ဘွားပိုင် ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် ပျားဂေဟာကို စစ်တပ် ထိပ်တန်း အရာရှိကြီး များခွဲစေယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် စစ်တပ်မှ ဘောင်းဘီးချွတ်များ နှင့် ဘောင်းဘီဝတ်များ လွှတ်တော်ထဲတွင် ၉၀% ကျော် နေရာယူထားကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော် အခြေအနေတွင် တပ်မတော်ကြောင့် ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့သည်ဟု ခံယူထားသော ပြည်မမှ ဗမာများအတွက် တပ်မတော် သားများအတွက် အခွင့်အရး အဖြစ် ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံနိုင်သော်လည်း တပ်မတော် မရှိပဲ ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသားများ အနေဖြင့် လုံးဝ လက်ခံ နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပင်လုံစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များတွင် ကချင်နှင့် ချင်း စစ်တပ် အရာရှိကြီးများ ပါဝင်သော်လည်း ကယား နှင့် ရှမ်းစစ်တပ် အရာရှိကြီးများပါဝင် ခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ရှမ်းပြည်လူငယ်၏ အဓိက ဇာတ်ဆောင်ဖြစ်သော ဗိုလ်ထွန်းအုံသည် စစ်တပ်မှ ဆိုသော်လည်း ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုသော အခါ လက်မှတ် ထိုးခွင့် မရခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော သမိုင်းကြောင်းများအရ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲစေရန် တပ်မတော် ကောင်းစားရေး မူဝါဒများကို စွန့်လွှတ်ကာ ပြည်သူလူထု ကောင်းစားရေး ရေး အတွက် ပိုမို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။
သို့မှသာ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီး တပ်မတော်အင်အား ကို တိုင်းပြည် ၏ စီးပွားရေး နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်သည့် အင်အားအထိ လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တပ်မတော်တွင် ပိုလျှံနေသော စစ်ဗိုလ်များ နှင့် အရာရှိကြီးများကို ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ ၏ အရည်အချင်းအလိုက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဖြင့်တည်ဆောက်သော စက်မှုဇုန်များတွင် လုပ်သားများအဖြစ် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် ကျရာတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာ နိုင်ငံသားကောင်းရတနာများ အဖြစ် အမိနိုင်ငံကို ကျေးဇူးဆပ် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နှင့် တပ်မတော်သားများ နေရာရရှိရေး အတွက် တပ်ပြအပ်ပါသည်။
Reply	angel February 14, 2013 - 2:32 pm	စစ်တပ်မျိုးဆက်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ကကျဉ်ဆန်တွေကြား
Reply	Win Myint February 14, 2013 - 3:41 pm	သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးအဖြစ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းကို ခန့်အပ်ခြင်းသည် ကာချုပ်ကျေနပ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်
အရင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် အပေါင်းအပါများလက်ထက်တွင် စစ်တပ် (ဦးပိုင်)နှင့် ZTE company တို့ ပေါင်းလုပ်ထားသော အဆင့်မမီသည်. ဂိုတာဖုန်းများကို ပြည်သူသို့ ၈သောင်းကျပ်နှင့် အော်ပရေတာမယူပဲရောင်းချမည်ကို ကန့်ကွက်ခဲ့သောကြောင့် ကာချုပ်အတွက် မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ယခုမူ ကာချုပ်လူ သည် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဖြစ်လာပြီဖြစ်သဖြင့် ဦးပိုင်၏ ဂိုတာဖုန်းရောင်းချရေးသည် ပန်းခင်းလမ်းသာလျင် ဖြစ်ပေမည်။
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးကို ကာချုပ်လူ မခန့်ဘဲ အခြားပညာရှင်ကို သာနေရာပေးလျင် စစ်တပ်၏ ဂိုတာဖုန်းများ ကိုကန့်ကွက်လျင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အတွက်ရော၊ကာချုပ်အတွက်ပ့ါများစွာအခက်တွေ့ စေမည်။ ယခုကား အားလုံးအဆင်ပြေသောလမ်းကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်သူတွေကား အဆင့်မမီသည့် သမ္မတကြီးကောင်းမှုနှင့် ဂိုတာဖုန်းများကို ကိုင်ရပေတော့မည်။
Reply	maungtan February 14, 2013 - 4:09 pm	စစ်သင်တန်းဘွဲ.ရဆိုတော. ဆက်ဆံရေးကျွင်းကျင်မှာပါ။ ဟာဟာဟာဟာ
Reply	maungtan February 14, 2013 - 4:15 pm	စစ်သင်တန်းကျောင်းဆင်းဆိုတော.မြတ်ဟိန်းကဆက်ဆံရေးကျွင်းကျင်မှာပါ။ဟာဟာဟာဟာ
Reply	မင်းမင်း February 14, 2013 - 7:23 pm	တိုင်းရင်းသားများ ဘယ်နေရာမှာ ပါရမှာလဲ။ တိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်စရာမလိုသေးလို့လား၊ ဆက်သွယ်ရေးတို့၊ ဘာတို့၊ ညာတို့၊ နည်းပညာပိုင်းကအစပေါ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဆိုရင် တကယ် မရှိသေးတာ အားလုံးအမြင်ပဲ။ ရှိစရာမလိုသေးလို့ ဟုတ်မှာ။
၀န်ကြီးဌာနတွေမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘယ်အချိန်ကျမှ ပါဝင်ခွင့် ရှိနိုင်မလဲ။ ကြာအုံးမှာလား။ သဘောက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလို လူမည်းတွေ သမတဖြစ်လာသလိုမျိုး ရာစုနှစ်ပေါင်း အကြာကြီး စောင့်ရအုံးမှာပေါ့။ တိုင်းရင်းသားတွေ စိတ်ဓါတ်မကျ ကျပါနှင့်။ ဖြစ်လာမှာပါ နှောင်နှစ်(၃၀၀)လောက်ဆိုရင် သမတတို့ ၀န်ကြီးတို့ ဖြစ်လာကြမှာပါ။ စောင့်ကြပါ။
Reply	aung naing February 14, 2013 - 8:57 pm	Ko Myat Hein is more D.S.A senior intake than Ko Min Aung Hlaing………..So ,he want to take out from military because of senior man…..That’s why they negotiate…….
Reply	ပါကြီးဖိုး February 14, 2013 - 9:22 pm	ယနေ့ခေတ် စစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ကိုယ်ကျိူးစွန့် အနစ်နာခံမှု၊ ပြည်သူနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်မှု…စတဲ့ ကောင်းတဲ့စ်ိတ်ဓါတ်အမွေကို မရရှိခဲ့ဘဲ ဦးနေဝင်း၊ ဦးသန်းရွှေတို့လို အာဏာရှင်များထံမှ ငါ့အတွက် ငါ့မိသားစုဆွေမျိူးအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ငါ့လူတွေအတွက် ဆိုတဲ့ ငါအတ္တရှေ့တန်းတင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်အမွေကိုသာ ရရှိခဲ့ပုံရပါတယ်။ အဲဒီစိတ်ဓါတ်တွေက တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ကျိကျိတက် ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ သူဌေးကြီးတွေ ဖြစ်လာစေခဲ့တယ်။
Reply	K Z Y Htun February 15, 2013 - 7:57 am	If President U Thein Sein appoints U Myat Hein asaminister, it will beawrong move made by U Thein Sein. U Thein Sein should, at least, explain why he prefers U Myat Hein to beaminister.
Hopefully, this would not affect the role of U Thein Sein’s party in the election of 2015.
Reply	K Z Y Htun February 15, 2013 - 8:01 am	This is the wrong move made by U Thein Sein. Hopefully, this move will not affect his party in the election of 2015.
But, it will be the other way around if U Myat Hein can perform asaminister according to the people’s needs.
Reply	lwinhtaytunwai February 15, 2013 - 9:46 am	ဘာမှမထူးခြားပါဘူး။စစ်အကျီင်္ချွတ်ပြီးသမ်မတဖြစ်လာတာကိုး။သူ့လူကိုပဲ့ခန့်မှာပေါ့။ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှာပါလို့မရဘူးဆိုတာသိပါလျှက်နဲ့တမင် လုပ်တာ။အခုထိနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတုန်းပါပဲ့လား။အတော်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
Reply	rocker February 15, 2013 - 10:12 am	မြန်မာပြည်ကြီးပြောင်းလဲနေပီဆိုဘယ်သူကပြောတာလဲ?
Reply	rocker February 15, 2013 - 10:20 am	သူတို့မဖြစ်မနေပြောင်းရမယ့် တစ်နေရာတော့ရှိတယ်
Reply	မြန်မာပြည်သား February 15, 2013 - 11:49 am	စစ်တပ် ကလူပဲ ခန့်မှာပေါ့။
ဒါမှ အထက်က ဘာခိုင်းခိုင်း အတွန့်မတက်ပဲ လုပ်မှာပေါ့။
ဒါမှ သမ္မတ ရုံးက အဘကြီးတွေ ပွဲခ ရွှင်မှာ။
ဒါ က တိုင်းပြည်အတွက် ဘဘစိန်ရဲ့ စေတနာ..
Reply	aungkyawsan February 15, 2013 - 2:52 pm	အခု ထက်ထိ အရင်အတိုင်းပါပဲ ၀န်ထမ်းတွေ ကိုလစာ တိုးပေးဖို့ ကျ တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ ပြောတယ်.. တပ်က ဌာနဖက် ပြောင်းလာ တဲ့ လူတွေ ကျ တော့ တပ်ပင်စင်ေ၇ာ ဌာန လစာ ရော ပေးထား တော့ သူ တို့လူ တွေ က (၁လ)ကို (၂လ) စာ ရပြီး သားလေ၊၊၊၊၊
တိုင်းပြည် ဆိုတာ ဘာလဲ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ဘာ လဲ လူထု ဆိုတာ ဘာ လဲ .. ကိုသိန်းစိန်
(သမ်မတ) တို့အဖွဲ့သိ အောာင် ကြိုး စား သင့် ပါ ပြီ ၊ ၊ ၊
Reply	arthur win thu February 15, 2013 - 3:11 pm	Just the birds with the same feather fly together. I would like to suggest to the innocent people of Myanmar not to expect too much from the Mr President.
Reply	မင်းကြီးညို February 17, 2013 - 10:12 pm	ဒါတွေက သမ္မတကြီးရဲ့ခန့်ထားပိုင်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေလေ၊ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။ အမေရိ
ကန်မှာလဲ သမ္မတအိုဘားမားက သူခန့်ချင်တဲ့လူကို ခန့်တာပဲ။ ကွန်မင့်တွေရေးပြီး ဆန့်ကျင်
နေလို့ကော ရပ်တန်းက ရပ်သွားမှာတဲ့လား။ သနားလိုက်တာ ဟဲဟဲ…
Reply	maung Ko ko February 18, 2013 - 11:05 pm	အရည်အချင်းကို မကြည့်ပဲ သမ္မတကြီးနှင့် နီးစပ်သူကို ခန့် ခြင်း၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးများနှင့် နီးစပ်သူကို ခန့် ခြင်း၊ကိုယ်တပည့်မဟုတ်သူတို့ကို ဖြုတ်ချခြင်း တို့ သည် သမ္မတကြီးရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် အရ ဖြစ် ၍ ပြည်သူများက အကြံပြု လို့ ရမည် မဟုတ်ပါ။ သို့ သော် သမိုင်းကပြောပါလိမ့်မည်။
Reply	sunny February 28, 2013 - 7:53 am	Will myanmar change the way to democracy? Talk is lound but actions remain the same as their predecessor, Ne Win and Than Shwe.
Whatapity for citizen of myanmar.